ဆရာ ဇင်ယော်နီ ၏ ( ၁၅ ) ရက်စာ ဟောစာတမ်း ( 14.7.2019 မှ 27.7.2019 ထိ ) - CeleLove
ဆရာ ဇင်ယော်နီ ၏ ( ၁၅ ) ရက်စာ ဟောစာတမ်း ( 14.7.2019 မှ 27.7.2019 ထိ )
July 14, 2019 Cele Love ဗေဒင်ကဏ္ဍ 0
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များံ့လည်း ပပြောက်ပြီး ကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အလုပ်ကိစ္စများ အစစအရာ အဆင်ပြေကြပါစေ
” တနင်္ဂင်္နွေ သားသမီးများ ”
ယတြာ – သီလရှင်တစ်ဦးကို ငွေငါးရာ လှူဒါန်းပြီး လိုရာဆုတောင်းပါလေ
” တနင်္လင်္ာ သားသမီးများ ”
ယတြာ – မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးကို စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလေ
” အဂါင်္ သားသမီးများ ”
ယတြာ – အိမ်အနောက်ဘက်တွင် သခွားသီးတစ်လုံးကို ချိုးချေ၍ လွှတ်ပြစ်လိုက်ပါလေ
” ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ”
ယတြာ – အုန်းသီးပါသောမုန့်သုံးခုကို သက်ကြီးရွယ်အိုများထံ ဒါနပြုပါလေ
” ကြာသပတေး သားသမီးများ ”
ယတြာ – ဆရာသမားတစ်ဦးကို နွားနို့လှူရင်း ဆုတောင်းပါလေ
” သောကြာ သားသမီးများ ”
ယတြာ – တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်အား ပေါင်မန့်တစ်ချပ်ကျွေးရင်း မိမိ၏လိုအင်ဆန္ဒကို ဆိုတောင်းပါလေ
” စနေ သားသမီးများ ”
ယတြာ – နွမ်းပါးသူတစ်ဦးကို သစ်သီးကျွေး ဒါနပြုပါလေ
ခုနှစ်နေ့ ခုနှစ်နံ ကိုယ်စားပြုမွေးနေ့ပိုင်ရှင်များအားလုံးံ ချမ်းသာပြည့်စုံ လိုအင်ဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝထဲ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသော် …. ။ ။
ဆရာ ဇငျယျေျာနီ ၏ ( ၁၅ ) ရကျစာ ဟောစာတမျး ( 14.7.2019 မှ 27.7.2019 ထိ )
ခုနှဈျရကျသားသမီးမြား အားလုံး စိတျခမျြးသာကိုယျကနျြးမာပွီး လိုအငျဆန်ဒတဈလုံးတဈဝပွညျ့စုံကွပါစေ ကံဇာတာအညံ့မြားံ့လညျး ပပွောကျပွီး ကံပှငျ့ စနျးပှငျ့ မတ်ေတာရေး အခဈြရေးမြား အလုပျကိစ်စမြား အစစအရာ အဆငျပွကွေပါစေ ….
” တနင်ျဂင်ျနှေ သားသမီးမြား ”
ယတွာ – သီလရှငျတဈဦးကို ငှငေါးရာ လှူဒါနျးပွီး လိုရာဆုတောငျးပါလေ
” တနင်ျလင်ျာ သားသမီးမြား ”
ယတွာ – မိတျဆှတေဈဦးဦးကို စာအုပျလကျဆောငျပေးလိုကျပါလေ
” အဂါင်ျ သားသမီးမြား ”
ယတွာ – အိမျအနောကျဘကျတှငျ သခှားသီးတဈလုံးကို ခြိုးခြေ၍ လှတျပွဈလိုကျပါလေ
” ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ”
ယတွာ – အုနျးသီးပါသောမုနျ့သုံးခုကို သကျကွီးရှယျအိုမြားထံ ဒါနပွုပါလေ
” ကွာသပတေး သားသမီးမြား ”
ယတွာ – ဆရာသမားတဈဦးကို နှားနို့လှူရငျး ဆုတောငျးပါလေ
” သောကွာ သားသမီးမြား ”
ယတွာ – တိရိစ်ဆာနျတဈကောငျကောငျအား ပေါငျမနျ့တဈခပျြကြှေးရငျး မိမိ၏လိုအငျဆန်ဒကို ဆိုတောငျးပါလေ
” စနေ သားသမီးမြား ”
ယတွာ – နှမျးပါးသူတဈဦးကို သဈသီးကြှေး ဒါနပွုပါလေ
ခုနှဈနေ့ ခုနှဈနံ ကိုယျစားပွုမှေးနပေို့ငျရှငျမြားအားလုံးံ ခမျြးသာပွညျ့စုံ လိုအငျဆန်ဒမြား တဈလုံးတဈဝထဲ ပွညျ့စုံနိုငျကွပါစသေျော …. ။ ။
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လုံးဝလက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့ !
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ကိုမှ မဖတ်ဘဲ ကျော်သွားရင် မင်းဘယ်လိုပို့စ်မျိုးကို ဖတ်ချင်တာလဲ?